Dubai Frame | Ọdịdị akara ngosi nwere ọmarịcha echiche nke Old & New Dubai
Lee nnukwu foto
Ụkpụrụ Dubai bụ ihe ngosipụta mara mma nke nwere 'okpokolo agba' echiche dị egwu banyere Dubai ochie na nke ọhụrụ, ebe ọ na -eje ozi dị ka àkwà mmiri atụ nke na -ejikọ akara ngosi ala mmụọ n'oge gara aga na ọmarịcha onyinye ya. Agara m Frame Dubai na mgbede n'oge elekere ọla edo. Oge mgbe obodo mara mma nke Dubai na -ele anya karịa ka ọ na -enwu ma na -agbasi ike, ka anyanwụ mgbede na -amụmụ ọnụ ọchị na ya. Akara ngosi mara mma a dị Zabeel Park.
Ụkpụrụ Dubai dị mita 150 n'ogologo, mita 93 n'obosara bụ àkwà mmiri na -ejikọ ụlọ elu abụọ. Akara ngosi yiri okpokolo agba foto. Ka anyị na-abanye na mbata, onye nduzi nabatara anyị nke mere ka anyị mara na nleta ahụ ga-abụ njem n'ime oge gara aga, ugbu a, na ọdịnihu nke Dubai.
Malite na ihe ndị mere n'oge gara aga, a na -eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ akọ akụkọ obodo gara aga. A na -eji ngwakọta ihe mmetụta holographic na ihe nkiri, yana isi na -esi ísì ụtọ na egwu ọdịnala.
Ihe na-esote bụ ugbu a, ka ị na-abanye n'ọdụ ụgbọ elu. Tebụl a bụ ule iji mara ma ị bụ onye egwu egwu ma ọ bụ na ị bụghị. Ọ bụrụ na ị nwere obi ike zuru oke, ị nwere ike banye na àkwà iko opaque dị mita 50 n'ogologo. Edere ya site na kristal mmiri mmiri nwere ihe nkiri na -akpata ya bụ ihe mmetụta, ala na -apụta ìhè naanị mgbe ị na -eje ije na ya. Ị nwere ike ileba anya n'ala wee chee na ị na -aga ikuku. Ozugbo n'elu okpokoro ahụ, akụkụ ugwu na -ahụ maka Dubai ochie. Na ndịda nwere ihu igwe na-eku ume nke Dubai ọgbara ọhụrụ. Ị nwekwara ike ịse eserese na ihuenyo mmekorita pụtara ìhè.
Na njedebe, mpaghara na -abịa, ọwara oge na -egosi gị ihe Dubai ga -adị n'ime afọ iri ise na -abịanụ. Taksi na -efe efe, ibi ndụ n'okpuru mmiri, ọrụ na mbara igwe, nnyefe drone, na -egosipụta ihe niile ọdịnihu nwere ike ijide.
Ịzụta tiketi n'ịntanetị na -ewepụ nsogbu nke iguzo n'ahịrị ogologo na ichere echere. Dubai Frame na -akọ akụkọ mgbanwe Dubai site na ime obodo ịkụ azụ dị umeala gaa n'obodo mepere emepe na -egbu maramara. Ọ bụ ahụmịhe n'onwe ya.
By eze 21|2022-05-23T17:52:59+05:30April 15th, 2019|blog|Comments Off na Dubai Frame na -enye gị ntakịrị nkọwa banyere ihe gara aga Dubai, ugbu a na ọdịnihu